Bartercard | Nchịkwa Azụmaahịa Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Bartercard Franchise
Onye njikwa Franchising
Gịnị bụ Bartercard na ọrụ ndị ọ na-enye?
Kemgbe mmalite nke Bartercard na 1991, ụlọ ọrụ azụtala ahịa n'etiti ndị nwere kaadị 55,000 gburugburu ụwa. Emebere ya iji nyere ndi ahia aka imeziwanye uzo ha si enweta ego na ibelata mmefu ego site na iji ahia ohuru. Bartercard ewerewo echiche nke azụmaahịa ọdịnala ma jiri teknụzụ nke narị afọ nke 21, mepụtara usoro ahia na-enyere ndị ahịa aka ịzụ ahịa site na iji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha.
Bartercard na-arụ ọrụ n'ime mba itoolu ma nwee ọfịs 75 n'ụwa niile na-enye ndị otu ya na ndị ọrụ aka ịmalite ahịa ahịa ọhụrụ na ọkwa mpaghara, mba na mba. Bartercard na-enyekwa usoro akwụmụgwọ na-enweghị ọmụrụ nwa, na-ekepụta ụzọ ọzọ ị ga-esi na-enyere gị aka itinye ego na uto nke azụmaahịa gị.
Ike nke ịgbaji Bartercard nke oge a bụ na ị nwere ike chekwaa ego ma belata mmefu site na iji ego igwejị anyị, nke a maara dị ka Azụmaahịa Azụmaahịa, iji belata ngwa ahịa ma ọ bụ ọrụ gị na-azụ ahịa na azụmaahịa ọ bụla dị na netwọk Bartercard.
Kedu ihe bụ Bartercard Franchisee?
Dịka Franchisee nke Bartercard, ị ga-enwe ike inweta ndị otu nọ n’ókèala gị nke ị ga - enyere aka ịre ahia ma ọ bụ ọrụ ha na netwọkụ dum. Echegbula onwe gị, Bartercard Head Office ga-agba akwụkwọ ibe gị ụgwọ, nkwupụta ma chụsie ụgwọ ọjọọ. Ga-enwe kọntaktị na njikwa anyị nke Franchising ga-enyere gị aka n'ajụjụ gị niile, ọzụzụ na ndị otu gị.
Franchisees na-eto azụmaahịa ha site na izute ndị nwe azụmaahịa ma gosipụta etu Bartercard si arụ ọrụ yana etu Bartercard si bụrụ isi ọrụ na mmepe nke azụmahịa ha site na:
Na-ekwe nkwa iweta ndị ahịa ọhụụ na ọnụahịa ahịa dị elu
Chekwa ego ma kwalite usoro ego
Inye ohere iji mejuputa ikike ma obu oge uda ma ree ahia ha n’enweghi onyinye ma obu inyepu ego
Imezi uru uru
Inye akara akwụmụgwọ na-enweghị ọmụrụ nwa iji chekwaa ego
Kedu ihe agụnyere na ngwugwu aha?
Bartercard na-enye mmemme nkwado zuru oke nke gụnyere izu otu ọzụzụ siri ike, ịbanye na nyiwe Barterversity anyị na usoro nlekọta ọzụzụ post nke gụnyere ọzụzụ ngalaba. Franchisee ga-enwe ohere itinye aka na nkwụghachi ụgwọ mpaghara na ihe nrite ugwu yana nzukọ abụọ n'otu afọ.
Lee ihe anyị nyere gị:
Mpempe akwụkwọ nkwado na mkpọsa ozi
Ihe ruru PC abụọ (i5, ọgbọ nke isii ma ọ bụ karịa)
Tonweta na usoro CRM anyị
Kaadị Ahịa Maraja & Azụmaahịa
Akaụntụ Outlook 365 & DocuSign
Ike inweta ikike ọchịchị
Onu ogugu ndi di n'okpuru bu ihe anyi n’ile anya ndi franchise ga-enweta site na onu ahia ha na ndi otu ha. Agbanyeghị na ndị a abụghị nkwa ma ọ bụ akwụkwọ ikike nke ihe ị na-enweta, na ịrụsi ọrụ ike na ntinye, anyị na-atụ anya ka aga-ezute ọnụ ọgụgụ ndị a.
Kedu ka m ga-esi malite ịtọlite ​​azụmaahịa Bartercard?
Bartercard na-enye ohere zuru oke iji wulite ma rụọ ọrụ azụmahịa gị site na nkwado na nkwado nke ika na-eduga n'ụwa.
Iji malite ajụjụ gị, biko mezue ụdị Ajuju Ugbu a. Otu onye na Ngalaba Bartercard Franchise ga-akpọtụrụ n'ime awa 48.